Omnye umqhubi wenqwelomoya ubhubhile, ababini bonzakele kwi-jet ezimbini 'ingozi'
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » Omnye umqhubi wenqwelomoya ubhubhile, ababini bonzakele kwi-jet ezimbini 'ingozi'
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Safety • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
T-38C Talon supersonic iijethi zoqeqesho eLaughlin Air Force Base
I-injini ye-injini ye-Northrop T-38 yijethi yokuqala yehlabathi yoqeqesho oluphezulu, kwaye ibikwinkonzo yoMkhosi woMoya wase-US ukusukela ngo-1959.
Iijethi ezimbini ze-T-38C zeTalon zoqeqesho eziphezulu zase-US zibandakanyeke 'kwingozi yenqwelomoya' kumgaqo weenqwelomoya. Laughlin Air Force Base, ibekwe kufutshane neDel Rio, eTexas kufutshane nomda wase-US-Mexico, malunga nentsimbi ye-10am ngexesha lasekhaya namhlanje.
Ngokwengxelo evela Laughlin AFB, omnye umqhubi wenqwelo-moya uye wabulawa yaye abanye ababini bonzakele ngexesha 'kwindlela yeenqwelo-moya.'
Omnye umqhubi wenqwelo-moya wafela apho. Omnye wasiwa kwiZiko lezoNyango loMmandla weVal Verde eDel Rio, waphathwa waza wakhululwa. Umqhubi wesithathu obandakanyekayo 'kwingozi' ukwimeko emaxongo, kwaye wafuduselwa kwiZiko lezoNyango laseBrooke Army eSan Antonio. Amagama abo agciniwe ngelixa kulindelwe isaziso sezalamane zabo.
“Ukuphulukana noogxa bam kubuhlungu ngendlela engakholelekiyo kwaye ngentliziyo ebuhlungu ndivakalisa uvelwano lwam olungazenzisiyo,” utshilo uColonel Craig Prather, inkumanda ye47th Flying Training Wing.
"Iintliziyo zethu, iingcinga kunye nemithandazo ikunye nabaqhubi bethu ababandakanyekayo kule ngxaki kunye neentsapho zabo."
I-injini ye-T-38 ye-injini ye-Northrop yijeti yokuqala yehlabathi yoqeqesho oluphezulu, kwaye ibikwinkonzo yoMkhosi woMoya wase-US ukusukela ngo-1959. Icwangciselwe ukutshintshwa yi iBoeing I-T-7 Red Hawk iqala ngo-2023.